Marar badan oo aad naftaada ka heli doontaa xaalad meesha aad rabto in aad ku gubi files si aad u ah files CD oo badan tahay in aadan jeclaan isticmaalaya daaqadaha dhafan ama gubi Mac. Halkan waxaan ku eegno ugu wanaagsan ee 10 kale oo halkaas aad u.
Tani waa software in kuu ogolaanayaa inaad si ay u gubaan tiro balaadhan oo ah qaabab file fudayd. Iyada oo ay taasi qalab khafiifa, hal abuuri karaan iyo xitaa hubi disc images of qaabab kala duwan oo ay ka mid yihiin .iso, .cue, .bin, .img iyo wax ka badan. Dhammaan sawiradaan la gubi karaa in CD-yada, DVD-yada iyo Blu-Ray muuqan siiyey in software uu ka helay interface saaxiibtinimo. Waxaad ka soo dejisan kartaa software ka http://www.imgburn.com/ oo lacag la'aan ah!
2.Explore & Guba 1.6
Tani waa software miisaanka yar in lagu daro doonaa user daaqadaha. Sida user ah, ay xog aad yaabiyo doonaa in aad u baahan tahay inaad samayso waa click xaq ku gal / files aad jeclaan lahayd inaad ku gubtaan iyo click ku files gubashada in video disc doorasho in la faray in ay saaxir ah si ay u gubaan faylasha aad. Download software ka http://www.exploreburn.com/ oo wuxuu ku raaxaysan faa'iidadiisa.
3.Tiny gubi 1.0.202
Tani waa qalab la'aan ah in si dhab ah ma uu fiirin doono si xor ah u wax user. Qalab lagu dhisayaa badan muuqaalada mid ka fili lahayd si aad u ogaato in software gubashadii ganacsi. Waxaa sidoo kale aad u sahlan in ay isticmaalaan qalab ee in aad leedahay oo keliya inay jiidi oo hoos u files galay software iyo aad diyaar u tahay in ay tagaan. Fiiri u software this on http://www.tinyburner.com/
Tani waa software cusub gubashada haysa dheelitirka u dhexeeya fudayd iyo dhammaystirka-waa dhameystiran yahay in dareen ah in loogu talagalay labada ganacsiga iyo guriga dadka isticmaala. Waa mid ka mid haynta qalab weyn ku hay in uu yahay lacag la'aan ah http://www.burnaware.com/ .
5. Nero Gubidda Rom
Software Tani waa xoog badan yahay wax soo saarka ah shirkad ayaa ahaa halbowlaha suuqa gubatay. Dabcan taasi oo lagu daray, laakiin haddii aanay ku filan in la sameeyo aad ka iibsan qalab this ka dibna waxaan hubaa quruxsan in aad la wooed doona qaababka ay. Waxaad dooxi karaa audio ka CD-yada iyo badalo audio ma waxaan halmaamay in aad sidoo kale xogta ku dul gubay CD this u adkeysan karaan xagashada karo. Waxaad xaqiiqo la yaabi doonaa software this. Iibso ka http://www.nero.com/enu/products/nero-burning-rom/why-buy-nero-burning-rom.php .
6.DVD Next Copy Tech Next
Tani waa software kale bixisay in kugu soo afuufi doonaa xusuusta ay pool ee awoodda. Waxaa kaliya ee aan ku xaddidnayn gubanaya faylasha aad la xawaare ultrafast laakiin waxa ay sidoo kale gaysteen qaar ka mid ah sifooyinka lagu naalloon karo oo ah qaab taageero u kala iibsiga ka dhexeeya ee files ka your computer qalabka sida iPod, Playstation badan fudayd. Kuwii iyo faa'iidooyinka kale oo badan waxaa laga iibsan karaa http://www.dvdnextcopy.com/dvd-next-copy-next-tech/ qiyaastii 20 $.
Qalabkani waxa uu diyaar u yahay labada Mac iyo daaqadaha users free ah oo mudo tijaabo ah mas'uul. Waxay kuu ogolaanaysaa inaad jiidi oo hoos u files si interface user iyo gubi in aad DVD, CD-yada Blu-ray ama. Waxa ay u ogolaataa audio iyo video duubo aan tanaasul ah oo tayo leh in boqortooyadii reer files audio. Waxa ay u ogolaataa u qaabab kala duwan sida regelingen, mp3, ogg, wma iyo kuwa kale oo badan. Isla sidaa ayaa laga odhan karaa oo ay taageerayaan qaabab video. Hel xuquuq buuxda u leeyihiin software ka gadan waa wax gadashada ka http://www.nch.com.au/burn/index.html.
8. Sothink Movie DVD Kan sameeyey,
Haddii aad raadinayso software free oo caan ah oo kuu ogolaanaya inaad si ay u abuuraan CD tayo sare leh oo ka clips filim aad ka dibna aad ka helay hal. Waxay qaban karaan tiro balaadhan oo ah video iyo maqal ah qaabab iyo sidoo lammaaneeyey by kartida xalinta saarka video. Waxaad ka qaadan kartaa software ka http://www.sothinkmedia.com/movie-dvd-maker/
9.Ashampoo Gubidda Studio 14
Software Kani waxa uu ahaa qiyaastii muddo ku filan inuu ku guuleysto kalsoonida badan. Waa aalad saaxir kaxaynayso in Sarre ah interface shaqada lagu naalloon karo ee loogu talagalay dadka ay. Muuqaalada ay dhab ahaan yihiin qiimihiisu $ 50. Iibso software weyn ka https://www.ashampoo.com/en/usd/pin/4010/burning-software/Ashampoo-Burning-Studio-14 .
Ugu dambeyntii, waxaa jira CyberLink Power2Go 8. Ka hadal ah interfaces user weyn oo inta badan qalabka liiskan aan islahayn lahaa heerarka loo dejiyey by software this. Software waa weyn yahay in la abuuro intros mashaariicda CD awood u isticmaala in ay sir xogta iyo in la abuuro muujinaya slide. Waxa aad ku kici doona 55 $ si ay u helaan software ka http://www.cyberlink.com/products/power2go-platinum/features_en_US.html?&r=1 .
> Resource > Top List > TOP 10 KARSANIN CD Best